Fomba fanao an-toerana hafahafa 7 ho an'ny mpizahatany | Vaovao momba ny dia
Sary | 20 minitra
Ny fitsangatsanganana dia traikefa tena mampanan-karena. Manokatra ny saina izy ary mamela hahafantatra fomba fiainana hafa. Ny firenena tsirairay dia samy manana ny kolontsainy sy ny fomba amam-panaony mifototra amin'izany, izay ho an'ny mpandeha maro dia mety hahagaga ary hanaitra mihitsy aza raha ampitahaina amin'ny azy.
Rehefa mitety an'izao tontolo izao isika, dia tsy mampaninona mihitsy ny manangona fampahalalana marobe momba ny firenena izay hotsidihintsika. Tsy amin'ny resaka toerana mahaliana na fitaovam-pitaterana ihany fa koa amin'ny lafiny fomban-drazana. Noho izany, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hodinihintsika ny fomba amam-panao sasany izay mety hafahafa eo imason'ny mpizahatany.
1 Andro Groundhog any Pennsylvania
2 Tsy misy voninkazo ho an'ny mpampiantrano any Shina
3 Mandrora, resaka fahalalam-pomba
4 Ny filaharan'ny phallic an'i Japon
5 Tompondaka amin'ny famelarana rantsantanana any Alemana
6 Fetin'ny sakafo alika any Sina
7 Fetin'ny fromazy mihodina ao UK
Andro Groundhog any Pennsylvania
Isaky ny 2 Febroary dia misy toetr'andro mahaliana amin'ny groundhog atao any Pennsylvania. Fantatra amin'ny anarana hoe 'Groundhog Day', io fankalazana io dia nalamina nanomboka tamin'ny 1841 (taona nanovozana ny antontan-taratasy voalohany) rehefa nentin'ny mpikarakara an'i Phil, ilay groundhog malaza, avy tao am-bavony mba haminany ny fahatongavan'ny lohataona.
Nilaza i Custom fa raha tsy mahita ny alokalony ny groundhog ary miala ao amin'ny lavaka, dia tapitra tsy ho ela ny ririnina. Raha etsy andaniny kosa, satria masoandro ny andro, mahita ny alokalony ilay groundhog ary miverina mankamin'ny lavadavaka, midika izany fa maharitra enina herinandro indray ny ririnina.
Na dia izany fanao hafahafa izany aza dia mitranga amin'ny mponina marobe any Etazonia sy Kanada, ny malaza indrindra amin'ny marmot dia ny Phil of Punxsutawney, Pennsylvania.
Tsy misy voninkazo ho an'ny mpampiantrano any Shina
Sary | Rinfocus
Te hanome sy omena voninkazo ve ianao? Raha mitsidika an'i Shina ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy mahalala fomba ny fanomezana fehezam-boninkazo ho an'ny tompon'ny trano vangianay. Heverina fa ny vahiny, tamin'io fomba io, dia nanondro fa tsy tsara tarehy ny trano ary noho izany dia mila zavatra handravahana azy ireo ny tompon-trano.
Toy izany koa, raha misy ny fotoana hanomezana fehezam-boninkazo ho an'ny vehivavy, dia tsara kokoa raha toa ka artifisialy izy ireo satria maharitra mandrakizay. Etsy ankilany, maina ny voajanahary.
Mandrora, resaka fahalalam-pomba
Eo amin'ny kolontsainay dia heverina ho tsy mahalala fomba ny mandrora imasom-bahoaka. Tsy misy olona te-hahita olon-kafa manala ny vavany. Saingy, ao amin'ny foko Massai (Kenya sy Tanzania) dia fanaon'ny olona ny mitsena ny olom-pantany sy ny namany amin'ny rora feno fitiavana. Matetika aza izy ireo no mandrora zaza vao teraka mba hiarovana azy ireo amin'ny fanahy ratsy.
Ny filaharan'ny phallic an'i Japon
Sary | GQ India
Mpizahatany maro no tsy maintsy mijanona rehefa mijery ny filaharan'ny phallic Kawasaki. Fetibe nentim-paharazana izay ankalazan'ny Japoney hangataka amin'ny andriamanitra ho an'ny fiterahana, fiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana, na ho an'ny zaza iray izay efa ho teraka tsara.
Ny axis afovoan'ny festival dia sarivongana lehibe miendrika filahiana izay entin'izy ireo miaraka amina filaharana voahodidin'ny fanehoana phallic lehibe sy kely hafa. Mba hankalazana an'ity andro ity, mihinana zava-mamy miendrika filahiana amin'ny karazana karazan'olona ny olona eny an-dalambe, satroka vita japoney sasany miendrika sperm, ary amidy ny T-shirt no asiana labozia sy fahatsiarovana hafa manana endrika phallic. Izay rehetra mety manana an'io teny io dia ho hita eo.
Tompondaka amin'ny famelarana rantsantanana any Alemana
Sary | Beaumont Enterprise
Isan-taona ny fifaninanana iraisam-pirenena ho an'ny Alpine dia tanterahina any Ohlstadt, Upper Bavaria, hisafidianana mpiady amin'ny rantsan-tànana tsara indrindra ao amin'ny firenena. Mety ho mampihomehy izany saingy ny marina dia ny an'ny Australiana sy ny Bavarians sasany dia resaka voninahitra.
Ireo izay mandray anjara amin'ireto tompon-daka ireto dia miomana am-pahazotoana handresy mandritra ny fotoana maharitra. Ny sasany mametaka baolina tenisy amin'ny tanany mba hahazoany tanjaka fa ny sasany kosa mizatra misavoana kilao maromaro amin'ny rantsantanana iray monja.
Fetin'ny sakafo alika any Sina
Sary | Alika faly
Isan-taona ao Yulin, Sina, ny fankalazana ny solstice amin'ny fahavaratra dia ankalazaina amin'ny festival sakafo alika. Na dia maro aza ny olona mihorohoro amin'ny hevitra hoe mihinana henan'alika, ny tena marina dia manana fakan-dalina ao amin'io faritra io ary efa an-jato maro izay.
Hita fa ny fihinanana henan'alika mandritra ny volana fahavaratra dia mitondra fahasalamana tsara, mampitombo ny fanaovana firaisana ary miaro amin'ny aretina. Ary raha miaraka amin'ny alikaola, tsara kokoa.
Ny hena ankasitrahana indrindra dia ny fiampitana an'i San Bernardo sy ny karazany avy any an-toerana satria mamokatra fako be dia be izy ireo ary maniry haingana be. Ny alika novonoina dia eo anelanelan'ny 6 sy 22 volana rehefa malemy indrindra ny hena hohanina.
Na dia nahavita nanery ny manam-pahefana Yulin handrara ny fivarotana hena alika tany amin'ny tsena sy trano fisakafoanana aza ny mpiaro ny tontolo iainana, amin'ny fampiharana dia manohy mandany azy io.
Fetin'ny fromazy mihodina ao UK
Sary | Telemadrid
Malaza tokoa ity festival ity ka ankalazaina any amin'ny tanàna maro any UK. Na izany aza, ny malaza indrindra amin'ny rehetra dia ny ao amin'ny distrikan'i Gloucestershire: Festival ny Cheese's Rolling Hill.
Ny fanoratana an-tsoratra voalohany an'ity hetsika ity dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia tsy misy marimaritra iraisana momba ny niandohany aza. Ny fomban-drazana manipy fromazy eny ambany havoana ary manenjika azy hisambotra azy dia inoana fa anisan'ny andian-hetsika fety izay natao nandritra ny fahavaratra mba hankalazana ny fahatongavan'ity vanim-potoana ity.
Tsy azo atao mihitsy ny misambotra ny fromazy raha mahatratra 100 km / ora ny hafainganany. Ny hany zavatra azon'ny mpandray anjara atao dia ny midina amin'ny havoana ary manandrana manatratra ny tanjona amin'ny toe-javatra tsara indrindra hisamborana azy amin'ny fotoana voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fomba fanao an-toerana hafahafa 7 ho an'ny mpizahatany